VAR စနစ်သစ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရန် နည်းပြ လိုပီတီဂူ တိုက်တွန်း၊ အဖွင့်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကို ကာဗာဂျယ် ? - Yangon Media Group
စပိန်နည်းပြ လိုပီတီဂူက လာမည့်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် ဒိုင်အထောက်အကူပြုနည်းပညာ VAR ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ရာ အသင်းအနေ ဖြင့် စနစ်သစ်နှင့် အသားကျ အောင်ပြင်ဆင်ထာရမည် ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြော ကြားခဲ့သည်။
စပိန်အသင်းသည် အုပ်စုအဆင့်တွင် ပေါ်တူဂီနှင့်တစ်အုပ် စုတည်းကျရောက်နေပြီး ပေါ်တူဂီက ပြည်တွင်းလိဂ်တွင် VAR စနစ်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သော်လည်း စပိန်လာလီဂါတွင်မူ လာမည့်ရာသီသစ်တွင်မှ စတင်ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ရာ ကစားသမားများအနေဖြင့် ကြိုတင်ပြင် ဆင်ထားရန်လိုအပ်မည် ဖြစ် ကြောင်း လိုပီတီဂူက ဆိုခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ လိုပီတီဂူက ”စပိန်မှာ VAR စနစ်မသုံးသေးတဲ့အချိန်မှာ ပေါ် တူဂီက ဒီစနစ်နဲ့ အသားကျနေပါ ပြီ။ ဒီစနစ်ဟာ တချို့အသင်းတွေ အတွက်အလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် တချို့ အသင်းတွေအတွက် အလုပ်မ ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့အသားမကျ သေးတဲ့ဒီစနစ်သစ်ကနေ အားသာချက်တွေရယူနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင် မှုတွေလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်”ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သော သောကြာနေ့က စပိန်ဒိုင်အစည်းအရုံးအကြီးအကဲ ကာဘယ်လိုက စပိန်အသင်းသားများကိုတွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် VAR စနစ်၏အရေးပါမှုကိုပြော ကြားခဲ့ခြင်းကလည်းများ စွာအထောက်အကူပြု မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်း လိုပီတီဂူကပြောခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ရီးရဲလ်နောက်ခံလူ ကာဗာဂျယ်အ နေဖြင့် စပိန်နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားကစားခွင့်ရမည်မှာ သေချာသော်လည်း အဖွင့်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုလွဲ ချော်ဖွယ်ရှိနေကြောင်း လိုပီတီ ဂူကခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ကာဗာဂျယ်သည် လီဗာပူးနှင့် ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတွင် တံကောက်ကြောဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်း ကြောင့် အနားယူနေရဆဲဖြစ် သော်လည်း လိုပီတီဂူမှာ အပြီး သတ်ကစားသမား ၂၃ဦးစာရင်းတွင် ၎င်းကိုရွေးချယ်ထားခဲ့သည်။
ကာဗာဂျယ်အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ကစားခွင့်ရမှာ သေချာသော်လည်း ပေါ်တူဂီနှင့် ကစားရမည့် ကမ္ဘာ့ဖလားအဖွင့်ပွဲ စဉ်ကစားရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း လိုပီတီဂူက ပြောကြားခဲ့သည်။ လိုပီတီဂူက ”ကြံ့ခိုင်မှုရလာဖို့ တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကာဗာဂျယ်ကို ကျွန်တော်တို့အား ပေးသွားရမှာပါ။ သူ့အနေနဲ့ ပြိုင် ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားခွင့်ရမယ်ဆိုတာကို သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ပထမပွဲမှာမကစားနိုင်ရင် ဒုတိယ ပွဲမှာကစားနိုင်မှာပါ။ အသေချာဆုံးကတော့ နောက်ဆုံးပွဲမှာကစားနိုင်ဖို့ပါပဲ”ဟုဆိုခဲ့သည်။
အာရှ ဖူဆယ် ချန်ပီယံရှစ် ၂ဝ၁၈ ပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လက်ရွေးစင် ဖူဆယ်အသင်းကို ကျပ?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကွန်ရက် အရည်အသွေးနှင့် သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံ ပိုမိုပြည့်စုံ ကောင်းမွန်လာ
မကွေး-ရေနံချောင်းလမ်းတွင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်နှစ်စီး ခေါင်းချင်းဆိုင် တိုက်မိ၊ နှစ်ဦးသေဆုံး၊